Malaysia UNHCR Accused of Betraying Refugees | ဒီရေ
“The UNHCR is tricking us because they want to settle corruption dealings with refugee processes. I don't know why some refugee receive different documents,” said Kyaw Htoo Aung from Malaysia, who works for worker affairs.
ယင်း အကြောင်း အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပူထရာဂျာရာရှိ လ၀က ရုံးသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ အသေးစိတ် ဖြေဆိုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ကွာလာလမ်ပူရှိ UNHCR ခေါ် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးတွင်လည်း လက်ခံ ဖြေကြားမည့်သူ မရှိပေ။